‘नागरिक एप’ सार्वजनिक : के हो, के-कस्तो सुविधा लिन सकिन्छ ? - Lekhapadhi सूचना र प्रबिधि : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
‘नागरिक एप’ सार्वजनिक : के हो, के-कस्तो सुविधा लिन सकिन्छ ?
लेखक : लेखापढी ३ माघ २०७७, शनिबार १४:५३ मा प्रकाशित
सिंहदरबारमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले नागरिक एप शुभारम्भ गरेका हुन् ।
सरकारले नागरिकका सम्पूर्ण व्यक्तिगत कागजात (सरकारी निकायले जारी गर्ने) वा सूचनालाई एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराएर सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘नागरिक एप’ सार्वजनिक गरेको हाे।
नागरिकले ‘नागरिक एप’बाट प्यान कार्डसम्बन्धीआवेदन गरी प्यान नम्बर प्राप्त गर्ने र सरकारलाई तिरेको करको विवरणसमेत मोबाइल सेटमार्फत जानकारी लिन सकिने छ । त्यस्तै नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्रको विवरणहरु प्राप्त गर्न सकिने छ ।
सरकारले अनलाइनबाट दिने सबै सेवालाई एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि ल्याएको एपलाई नै नागरिक एप नाम दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव हरिप्रसाद बस्याल बताए । बस्याल भन्छन्, ‘सरकारी सेवा जनताको हातहातमा पुर्‍याउन यो एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।’
स्मार्ट फोन बोक्ने नागरिकले मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर नागरिक एप (Nagarik App) डाउनलोड गर्न सक्छ । एप प्रयोग गर्न आफ्नो नाममा रहेको मोबाइल नम्बर हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि नम्बर कसको नाममा दर्ता छ भन्ने कुरा एपले स्वचालित रूपमा पत्ता लगाउने गरी प्रविधिको विकास गरिएको छ ।